Archive du 20180310
Raharaha AAA-Tiko Nilefitra ny fanjakana
Namoaka fanambarana ny masoivoho Amerikanina omaly ka nanameloka ny fanaovana sorona ireo ombin’ny orinasa AAA-Tiko any Andranomanelatra, izay efa roa no maty ary maro mitsipozipozy.
Andry Rajoelina Mitsikombakomba amin’ny HVM ?
Lasa resabe indray ny dian-dRajoelina tany Ambilobe nandritra ny fanamarihana ny andron’ny vehivavy ny 8 martsa lasa teo.
Harilala Ramanantsoa “Tsy tokony hatao mibahana ny firehana politika”
Vehivavy eo amin`ny tontolo politika, ny fiainam-pirenena ary ny toeran`ny vehivavy eo anin`ny fandraharahana. Fanontaniana manitikitika ny maro ireo ka izany indrindra no nanasan`ny Gazety Tia Tanindrazana an`i Harilala Ramanantsoa, vehivavy mpandraharaha raha misy zavatra azony ambara mikasika izany:
Antoko ATM « Tokony hofoanana ny fifaninanana mpitandro ny filaminana ! »
Nampahafantatra voalohany tetsy amin’ny Maestro Betongolo ny fisiany sy antom-pijoroany omaly ny antoko politika ATM na Avotse tanendraza Madagasikara. Fikambanana niforona ny taona 2015 tao Toliara izy ity, raha ny fanazavana, no niofo ho antoko politika ny volana oktobra 2017 teo.
Datim-pifidianana navoakan’i Henri Rabary-Njaka Mifanipaka be ihany ny hevitr’ireo mpanao politika
Mbola miteraka resabe eo anivon’ny tontolo politika Malagasy ilay datim-pifidianana ho filoham-pirenena Malagasy navoakan’ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy, Henri Rabary-Njaka, tany amin’ny TV 5 Monde tamin’ny sabotsy 03 martsa 2018. Samy hafa ny fanazana nomen’ireo mpanao politika Malagasy raha tarafina avy amin’ny fanehoan-kevitr’ireo olona roa nanontanian’ny Tia Tanindrazana ireto :
Gidragidra tany Toliara Antandroy 65 nosamborin’ny Emmoreg
Gidragidra tsy nifankahitana indray ny tany Toliara omaly, izay mbola tohin’ny fahafatesan’ny tovovavikely 15 taona tao Maninday hita faty ny marainan’ny 27 febroary teo.
Isan’ny vahoaka Malagasy 2,3% isan-taona ny fitomboany
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fiaraha-miasa eo amin’ny rafitra amerikanina USAID sy ny tetikasa HP+, izay tetikasa iray natao hihahiana ny fahasalaman’ny mponina, hahafahana manabevoho ny firafitry ny mponina eto Madagasikara na ilay antsoina hoe « Equipe Dividende démographique ».
Mpivarotra etsy Andravoahangy Nifanaiky fa hanadio tsena isan’andro
Nanao fanadioavana faobe ireo mpivarotra braokatera rehetra sy ny mpivarotra legioma tetsy Ambodivona, mitsofoka eo amin’ny Total omaly tolakandro. Ny lehiben’ny tsenan’ Andravoahangy,
Faritra iva eto an-drenivohitra Mbola betsaka ireo olona tsy manana kopia
Mbola betsaka ireo ankizy sy olon-dehibe tsy manana kopia mari-pahaterahana amin’izao eto an-drenivohitra.
Loto taorian’ny andron’ny vehivavy Nodiovina tanteraka ny teny Anosy
Ny ampitson’ny fanamarihana tamim-pomba ofisialy ny andron’ny vehivavy ny 8 martsa teo, nisian’ny diabe teny Anosy nandraisan’ny olona 20 000 ka hatramin’ny 23 000 anjara, dia nisy ny fanadiovana faobe teny an-toerana omaly.
Departemantan’i Mayotte Hiara-kiasa amin’ny CUA
Nihaona tamin’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny Alakamisy 08 Martsa 2018 ny delegasionina iray avy amin’ny Departemantan’i Mayotte.
Vehivavy ao Toamasina Vonona hiatrika ny fampandrosoana
Vonona hiatrika ny fampandrosoana ny firenena ireo vehivavy sy Renim-pianakaviana ao Toamasina na inona na inona olana sedrainy amin’ny fiainana andavanandro.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rabearisoa René na René tale Mahavelona sy mahatafita ny filalaovana baolina kitra
Mbola olo-malaza teo amin’ny sehatry ny baolina kitra Malagasy indray no vahinin’ny kintan’ny fanatanjahantena Malagasy ato amin’ity pejin’ny Tia Tanidrazana ity anio sabotsy 10 martsa 2018
Ivontoerana fanofanana rugby eny amin’ny kianja Maki Hotokanana amin’ny faran’ny volana izao
Efa vita hatrany amin’ny 85% ny asa tokony hotanterahina ankehitriny ny Ivontoerana fampiofanana rugby eny amin’ny kianja Maki eny Andohatapenaka raha natomboka tamin’ny desambra 2017 ny fanorenana azy.
Ligin’ny baolina kitra Amoron’i Mania Hanomboka rahampitso alahady izao ny taom-pilalaovana 2018
Nambaran’ny filohany, Randriantsoaniaina Nirilanto dit Dona, nandalo teto an-drenivohitra tamin’ity herinandro ity fa hanomboka rahampitso alahady 11 martsa ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Amoron’i Mania sokajy D-1 eo amin’ny taranja baolina kitra.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Manome lesona ny Japoney
Omaly zoma 9 martsa no natao tetsy amin’ny minisiteran’ny toekarena Anosy ny famelabelarana narahina adihevitra momba an’i Japon sy Afrika. Manampahaizana manokana momba ny toekarena sy ny fifandraisan’i Japon sy Afrika, sady mpampianatra any amin’ny anjerimanontolo any Waseda Tokyo,
Fanofanana avo lenta “Stileex Upgrade” Ny 24 martsa izao ny andiany faharoa
Tonga ihany ity ilay fotoana nandrasan'ny maro. Amin'ity volana martsa ity no hotanterahina ny “Stileex Upgrade” andiany faharoa. Fanofanana sy valandresaka mikasika fanatsarana sy fampandrosoana tetikasa tanterahin’i Simon Lee (Stileex), izy io.
Rehefa henon’ireo olona marobe fa mpianatry ny oniversite ao Toliara ny olon-tian’ilay vehivavy izay maty ka itsy voalohany no voarohirohy ho namono azy dia nitsoaka, dia niara-nizotra tao an-tampon-tanàna ireo olona mba hitady azy. Tsy mbola milamina ity tranga ity satria toa mainka koa nampirehitra afo teo anivon’ny foko antandroy ny fisamborana izay nitranga omaly.